Vlọ njem ụgbọ mmiri Viking, na Oslo | Akụkọ Njem
na vikings Ha bụ ndị protagonists nke akụkọ ntolite nke Europe, ma ruo oge ụfọdụ ugbu a, ha nọ na ejiji ọzọ maka usoro TV dị egwu, Vikings. Nke a dọtara uche ndị mba Nordic na ọdịbendị ha na ọ bụ ya mere taa anyị ga-eleta Viking Museumgbọ mmiri Museum.
Muselọ ihe ngosi nka dị na Oslo, Norway, ma bụrụ akụkụ nke Museum of Cultural History nke mahadum dị na mpaghara. Ga leta ya bụ ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na nke gị bụ Vikings na mmeri ha n'ihi na ụgbọ mmiri mbụ ọ bụ bụ ezigbo akụ.
2 The Viking hipgbọ mmiri Museum
Vikings bụ a Ndị Norse ghọrọ ndị ama ama na Europe na narị afọ XNUMXth site na ịkwakọrọ ihe ha. Ebe obibi ndị mọnk bụ anụ oriri ha kachasị amasị ha ma ụzọ ha gafere akara ha n'ihi na mwakpo ha bụ ọbara na ime ihe ike, ọbụlagodi oge ahụ. N'oge ahụ ndị kachasị ike na ike kacha ike na Europe emechabeghị nkwado, ya mere enwere ọnọdụ nke ihe egwu na enweghị nchebe.
Ma gafere oke ọhịa ndị a, a ga-echeta ya Ha bụ ugwu nke ndị Norman, ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha biri na Normandy, France. Anyị amatalarịị ebe ndị Norman gara Europe.
Vikings ha dere na runes, ruo taa o siri ike nghọta, ya mere, ọ bụ ihe mgbe ochie na ọdịnala gbochiri ka ịchọta akụkọ ntolite ya. Dika ha biri na ala nke adighi nma, ebupuru ha n'ime oke osimiri, ya mere ha mere mmiri ka ha buru uzo ha ma choro uzo ha ji enwe nkwurita okwu. N'ihi ya, ha bụ ndị ọkwọ ụgbọ mmiri dị ukwuu, ọbụnadị a na-ahụta na ha bụ ndị izizi rutere America.
Oge Viking na-abịa na njedebe gburugburu narị afọ nke XNUMX mgbe ndi Kristian mechara dozie na mpaghara ugwu na usoro nke ngwakọta. N'ụzọ doro anya, ọ dịghị ihe na-anwụ anwụ na ihe niile gbanwere ya, dịka anyị kwuru n'elu, ha mechara bụrụ ndị Norman dị ike, si France, rute Italytali, Jerusalem na Kiev, na Russia.
The Viking hipgbọ mmiri Museum
Muselọ ihe ngosi nka nwere akụ atọ: atọ ụgbọ mmiri mbụ viking nke gabigara oke osimiri otu mgbe. Onye mbụ n’ime ha na ndị kacha mara amara bụ Segbọ mmiri Oseberg. Vgbọ mmiri a nke Viking sitere na ili achọtara n'ugbo nke otu aha, na Vestfold County. Ili ahụ nwekwara ọkpụkpụ ụmụ nwanyị abụọ na ọtụtụ arịa.
Shipgbọ mmiri ahụ ụbọchị site na 834 AD ma akụkụ ya ụfọdụ emeela agadi. E gwuchara olulu ahụ na mbido narị afọ nke XNUMX.
Shipgbọ mmiri ahụ ọ bụ nnukwu osisi. Nwere Ogologo 21 na mita 58 n’obosara na a mast n'etiti itoolu na iri mita elu ọzọ ma ọ bụ obere. Ọ nwere ihe dị ka ụzọ iri na ise nke oghere ya chere na ọ dị ụfọdụ Ndị na-anya 30. O nwere arịlịka ígwè, azụ na ụta ahụ nwere ihe osise dị mgbagwoju anya ma mee atụmatụ ya na ụgbọ mmiri ahụ o nwere ike iru ọsọ 10 ọsọ.
Anyị nwere ike iche na ebe ọ bụ na achọtara ụgbọ a n'ime ili ọ hụtụghị osimiri, mana nke a abụghị ikpe. Shipsgbọ mmiri Viking niile nọ na ebe ngosi ihe mgbe ochie gara n'ezie tupu ebubata ya n’elu ala ma mee ya n’ili. Usoro nyocha ihe na mweghachi maka otu ụgbọ mmiri a were afọ 21 na mkpokọta. Ekwesịrị ịkwọ ụgbọ mmiri ahụ ma kpoo ya kpamkpam, mana nwayọ nwayọ tupu ị nwee ike isonyere ya wee jiri osisi mbụ rụzie akụkụ ya, 90%.
E nyekwara uche yiri nke a maka ụgbọ mmiri Viking abụọ ndị ọzọ na-edebe ihe ngosi nka: Okgbọ mmiri Gokstad na Tunas Ship. Achọtara Gokstad n'ili nke eze nke dị n'ubi a na-ekpo ọkụ na obodo Sandefjord, n'oge mgbụsị akwụkwọ nke 1879, site n'aka ndị na-eto eto abụọ. Ngwuputa ihe ochie malitere na 1880 ma n'oge na-adịghị anya ọ bịara doo anya na saịtị ahụ dị mkpa.
Gburugburu ụgbọ mmiri ahụ, e nwere mgbidi dị mita ise n'obosara na dayameta nke mita 45 n'ihi ya, ebe ahụ bụ nnukwu mgbidi. Clayrọ ahụ kpuchiri ụgbọ mmiri ahụ na-eme ka ụgbọ elu abụọ ahụ dị elu na ụta na ọdụ ụgbọ mmiri na-ere ma ọ bụ na-echekwa nke ọma n'ihi usoro mweghachi na-esote nke a gbasasịrị ma jikọta ya.
A na-akpọ ụgbọ mmiri Viking ọzọ na ụlọ ngosi ihe nka Gbọ mmiri Tuna, nke kwesịrị ịbụ ụgbọ mmiri ọsọ ọsọ nke bufere ndị mmadụ site n’otu akụkụ gaa n’ọzọ. A hụrụ ya na 1867 n’ugbo dị na Nedre Haugen, n’àgwàetiti Rolvsoy, nke dịdebere Fredrikstad na ọ bụ ụgbọ mmiri Viking mbụ a hụrụ ma chekwaa. Ili a bukwara ibu, ihe dị ka mita 80 n’obosara na mita anọ n’ịdị elu, otu n’ime nnukwu na Norway.
E mere nchọpụta ahụ mgbe ihe omimi nke oge a enwebeghị ọtụtụ ụzọ, yabụ ozugbo achọtara ya ụgbọ mmiri ahụ wepụrụ ngwa ngwa, ya mere nwoke nke no n’ime ya liri ya, ufodu n’ime ihe ya mebiri ma o bu furu efu. Ọ bụ nke kacha nta n'ime ụgbọ mmiri Viking atọ dị na ụlọ ihe ngosi nka ma a na-ewere ya dị ka nke kachasị ogologo, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 19 ikekwe.
Echere na nke ahụ ọ wuru gburugburu 910 afọ, na akpu, na na nwere ndị na-arụ ọrụ 12 n'otu akụkụ. O nwere ike ịbụ na ọ dị ngwa ngwa, dị ezigbo mma n'oké osimiri, ọ bụ ezie na enweghị ikike buru ibu. Ọ bụ ya mere e ji atụ amụma na enwere ike iji ya buru ihe bara uru dịka iko, ndị ohu ma ọ bụ ihe na-ebughi ibu.
Nleta nke ụgbọ mmiri atọ ahụ bụ ndị otutu ihe sitere na ili atọ a na-egosipụta, na nke ahụ meghere anya anyị ka Viking gara aga. Site na ngwa kwa ubochi rue na ngwa agha ma obu ihe ndi okpukpe.
Ọzọkwa, ugboro atọ n'otu awa muselọ ihe ngosi nka na-enye njem gaa Viking Age site na fim a na-akpọ Vikings Alive, nke a na-atụ n'uko ụlọ ihe ngosi nka. Vikigns Ndụ nwere ihe nkiri nkeji ise na obere ihe nkiri abụọ. N'ikpeazụ, ihe ngosi nka na-enye anyị a ụlọ ahịa onyinye ebe izu ihe ncheta, akwukwo na otutu ndi ozo. Na n'èzí enwere ụlọ nri bụ ebe dị mma maka mkparịta ụka banyere ahụmịhe Viking n'okpuru igwe okpomọkụ.
Ozi bara uru iji gaa na Viking Ship Museum
Enweghi njem nlegharị anya nke ihe ngosi nka haziri ma ee site na ndị ọzọ. I nwekwara ike ibudata a free audio ndu ngwa na mkpanaka gị, na ihe ngosi nka, ebe ọ bụ na e nwere WiFi, ma ọ bụ site n'ụlọ gị site na ịga na weebụsaịtị.
Lọ ihe ngosi nka nwere ala abụọ na mpaghara ngosi ahụ dabara adaba oche nkwagharị, ewezuga elu mbara ihu. Enwere ike ịnweta ọnụ ụzọ mbata, ọ bụ ezie na ọnụ ụzọ ahụ dị arọ. Ọnụ ụzọ dị n'akụkụ bụ maka naanị ndị ọrụ. N’ime e nwere oche nkwagharị na ụlọ mposi ndị pụrụ iche.
Muselọ ihe ngosi nka Mepee kwa ụbọchị. Site na Mee 1 rue Septemba 30 ọ na-eme ya n’etiti elekere itoolu nke ụtụtụ ruo elekere isii nke ehihe; na site na October 9 ruo Eprel 6 site na 1 ruo 30 elekere. Emechiri na Jenụwarị 10, February 4 na 1.
Thelọ ihe ngosi nka na-akwụ ụgwọ ego ntinye NOK 100 kwa okenye na 80 NOK maka ihe karịrị 65s. Tiketi ndị a bara uru 2 x 1, nke ahụ bụ, ha na-enye gị ohere ịbanye ụlọ ngosi ihe mgbe ochie abụọ, nke Shipgbọ mmiri Viking na akụkọ ihe mere eme Museum, ruo awa 48. Anaghị ere ha n'ịntanetị.
Muselọ ihe ngosi nka dị na Huk Aveny 35, 0287 Oslo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Oslo » Vlọ njem ụgbọ mmiri Viking, na Oslo
Ihe ị ga-ahụ na Dubrovnik